ကမ္ဘာ အေးဘုရား လမ်းပေါ်ရှိ အောင်သိန်း လင်း အိမ် ချီးထုပ် များ ဖြင့် အပေါက်ခံရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ကမ္ဘာ အေးဘုရား လမ်းပေါ်ရှိ အောင်သိန်း လင်း အိမ် ချီးထုပ် များ ဖြင့် အပေါက်ခံရ
ကမ္ဘာ အေးဘုရား လမ်းပေါ်ရှိ အောင်သိန်း လင်း အိမ် ချီးထုပ် များ ဖြင့် အပေါက်ခံရ
Posted by cherrywine on Nov 9, 2010 in Myanma News, News | 29 comments
ကမ္ဘာအေးဘုရား လမ်း နှင့် ဆရာစံ လမ်းထောင့်ရှိ ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝန် ဗိုလ်မှုးချုပ် အောင်သိန်းလင်း
၏ နေအိမ်ရှေ့ သို့ ယနေ့ ည ၈ နာရီ အချိန် ခန့် မှာ ဆန်နီ ပစ်ကပ် ကား ငယ် နှစ် စီးပေါ်မှ အသင့်
ပါလာသည့် ချီးထုပ် များ ဖြင့် ပစ်ပေါက်သွား ကြာရ ပူပူနွေးနွေး အနိုင်ရ ကြံ့ဖွံ့ အမတ် ကြီး ၏ အိမ်ရှေ့
တွင် ချီးများ ဖြင့် ပေကျံနေ သည် ဟု သတင်းရရှိ သည်။
ထိုချီးထုပ်များ ကို ရှောင်ကွင်း ပြီး မောင်း နှင့် ခဲ့ရသည့် အမှတ် ၄၃ လိုင်း ဘတ်(စ) ကားမောင်းသူ တစ်ဦး
က အာဂျီ နိုမို တို အိပ်အရွယ် ချီးထုပ် တွေ ပျံ ကျဲ နေတာ ပဲ ကားကို လာစင်မှာ ဆိုးလို့ တောင်ဖြေးဖြေး
မောင်းရတယ် သူ့ အိမ် ရှေ့ မှာ ဆို ချီးတွေက ပေပွနေ တာ ဟု FNG သို့ ပြောသည်။
မဲသမာမှု လုပ်ပြီး အနိုင်ရရှိသွား သည့် ရန်ကုန် မြို့ တော်ဝန် ဦးအောင်သိန်းလင်း သည် ချီးများ ကို မြင်
လျှင် မြင်ခြင်း ဗဟန်းအုပ်ချုပ် ရေး မှုး ရှုံး သို့ ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားသဖြင့် စည်ပင် ပန်းဥယာဉ် ဌာ
န မှ သစ်ပင်များ အားရေဖျန်း သည့်ကားဖြင့် အလျှင် အမြန် ပက်ဖြန်း ခဲ့ရသည် ဟု သိရသည်။
မြို့ တော်ဝန် အောင်သိန်း လင်းသည် ရွေးကောက် ပွဲ တွင် မသမာမှု ဖြင့် အနိုင်ရသဖြင့် အောင်ပွဲခံ
ဒင်နာ ပေးနေစဉ် ထိုကဲ့ သို့ ချီးထုပ်ဖြင့် အပေါက်ခံ ရခြင်း ဖြစ်သည်။
ချီးထုပ်ဖြင့် အပေါက်ခံရပြီး နောက် သူ၏ ညစာ စားပွဲ တွင် ရှိနေသည့် ယခင် ရန်ကုန် တိုင်းမှုးဟောင်း
ဗိုလ်မှုး ချုပ် ၀င်းမြင့် က ချီးစော် နံလိုက်တာ ဟု ဆိုကာ ပြန်လည် ထွက် ခွာ သွား သည် ဟု
မြို့ တော်ဝန် အောင်သိန်း လင်း သည် လူမုန်းများ သူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ယခု နှစ် အတွင်း ဖြစ်ပွား ခဲ့သည့်
ဈေးမီးလောင် မှု များ တွင် သူ့ ပယောဂ မကင်း ဟု မှတ် ယူသူများ လည်း ရှိသည်။
ယခင်သီတင်း ပတ်က ပြုလုပ် ခဲ့သော ကြံ့ဖွံ့ အဖွဲ့ ၏ သတင်းစာရှင်း လင်းပွဲ တွင် သတင်းထောက်
များ မေးမြန်းမှု များ ကို ဖြေကြားခြင်း မပြုဘဲ ပုဆိုးလှန် ပြခဲ့သေးသည်။
cherry wine has written 16 post in this Website..
View all posts by cherrywine →
အဟီး ရီရတယ် … တော်လိုက်တဲ့ လူတွေ ဘယ်လိုများ ချီးထုပ်တွေအများကြီးရအောင်စုပါလိမ့်
Its that really!
ပုဆိုးလှန်ပြတယ်ဆိုရင် သားရေကွင်းနဲ့ပစ်ပီး ပရုတ်ဆီနဲ့သာ ပွတ်လွှတ်လိုက်…
နောက်တစ်ခါဆို ချီးကား တစ်စင်းလုံးပါ သူတို့အိမ်ထဲရောက်သွားအောင် လုပ်ရမယ်…
တကယ်ကြီးလားဟင်.. ဖတ်ရတာတော့.. ရီရတယ်..
မြို့မေတ္တာခံယူသူဖြစ်မှာပေါ့.. ဈေးသည်တွေ ၂ပတ်လောက် မဖွင့်ရအောင် လုပ်လိုက်တာ.. တရုတ်တန်းမှာ လေဒီနဲ့ ရန်ဖြစ်လို့ ဆိုလား.. နောက်ပိုင်း တရုတ်တန်းမှာ ညနေ ဈေးတန်းများ လျောက်ရင် လူတွေပိတ်နေလို့ အဝေးကို မမြင်ဘဲ.. ဘာမှန်းမသိ ထောက်ထားတဲ့ ခါးလည်လောက်ရှိလဲ့ သံပိုက်လုံး တိုင်လုံးကို ရှောင် လျောက်နေရတယ်.. လူတွေ ပိတ်နေလို့.. ခါးလည်လောက်ရှိတဲ့ ပိုက်ကို သတိမထားမိလို့ကတော့.. အောက်ပိုင်း ဂွိလို့ မျိုးဆက်တောင်ပျက်နိုင်တယ်.. ကိုယ့် အရှိန်နနဲ့ ကိုယ်.. လူကို အန္တရာယ် ဖြစ်နိုင်တဲ့ သံပိုက်လုံး စစ်စစ်တွေပါ။
ချီးချီးချင်းတော့ ထူးမနံဘူး ပြောမှာပေါ့
ကောင်းလိုက်တဲ့လုပ်ရက်လေး………………………. နောက်တစ်ခေါက် နောက်တစ်ခေါက် ……………….
ဟိုတုန်းက ဦးပန်းအောင် .. သူက စည်ပင်က လာတာ .. ပထမတော့ ၀န်ကြီးဌာန (အမည် မမှတ်မိ) မှာ ဒုဝန်ကြီးပေါ့ .. ပညာရေးကို ၀န်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ကျောင်းတွေကို စစ်ဆေးရေးသွားတိုင်း အိမ်သာကို ၀င်စစ်တာပဲ .. ဘာလို့ဆို သူက ရေနှင့်မိလ္လာဌာနက ဌာနမှူးကနေတက်လာတာလို့ ပြောသံ ကြားဖူးတယ် ..
အခုလဲ ..စည်ပင်လူကြီးဆိုတော့ .. အမျိုးသားလွှတ်တော် အမတ်ဖြစ်သွားရင် ဘ၀ မေ့သွားမှာစိုးလို့ .. သတိပေးတာပဲ ဖြစ်မှာပါ .. တခုတော့ ရှိတယ် .. အဲဒီ အမတ်လဲ အိမ်သာတွေ စစ်ဆေးရေး ၀င်ချင် ၀င်နေမှာ .. လွှတ်တော်က အိမ်သာ တာဝန်ခံတွေ သတိထား .. ထုတ်လို့ရတဲ့ အိတ်တွေ အနားမှာ မထားနဲ့ .. ရေများများသုံးပြီး ရေလောင်းပေး .. ပြီးရင် ရေမွှေး ဖြန်းပေး .. ကြိုတင် သတိပေးတယ်နော် .. နောင်တော့မှ မှားပါပြီလို့ မပြောနဲ့ .. ကိုကြိုတင်က သိပ်မှန်တာ …
ဟိဟိ….လူ အ‌ယောက် ၁၀၀၀ ‌လောက် သူ့ အိမ်‌ရှေ့ ဖင်လှန်ပြီး ချီးပါရမှာ။
5 series မှာ အခု တလောပြနေတဲ့ ကိုရီးယား ရုပ်ရှင်မှာ မကြိုက်တဲ့ အမတ်ကို ပြည်သူတွေက ချီးထုတ်နဲ့ ပေါက်တဲ့ အခန်းကို ပြသွားတာ ၃ – ၄ ရက်လောက်ဘဲ ရှိအုန်းမယ်ထင်တယ်။ တော်ကြာ မဲ စရာ မရှိ ကြည့်လက်စ ကိုရီးယား ရုပ်ရှင်လေး ပိတ်သွားအုန်းမယ်..
ချီးမွမ်းတယ်(ဂုဏ်ပြုတယ်)ဘဲကြားဘူးတာဗျ။အခုတော့ ချီးနဲ့ပေါက်ပြီးချီးမြောက် တယ်ဆိုရမလား ။
အဖြစ်မှန်ဆိုရင်.. သူလည်း ကံနိမ့် နေပြီလား.. နာမ်နိမ်ခံရတယ် ပြောရမလားပဲနော်
ကောင်းပါတယ်။ ချီးတောင်အားနာတယ်။ ကြံဖွတ်ရဲ ဂတိပြုချက်မှာ – ပြည်ပလက်ကိုင်တုတ်မဖြစ်စေရတဲ့။ မြို့တော်ဝန်ကြီးက ပြည်တွင်း လူမျိုးခြားတွေရဲ့ လက်ကိုင်တုတ်လေ။ သူ့နားမှာကပ်နေတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးသမားတွေက ဘယ်သူတွေဝိုင်းနေတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသားလေ။ ပြည်သူတွေကို နှိပ်စက်လို့အားမရလို့ ဗလီဆောက်ပေးမယ်လို့လိမ်ပြီး လူမျိုးခြားဆီက မဲရအောင် အောက်တန်းကျကျ လုပ်သေးတယ်။ ချီးထုတ်နဲ့တောင်မတန်ဘူး။
win naing ပြောမှဘဲ.. မျက်စိထဲမှာ father land, mother land, Naing Group တခြားတော့ သိဘူး.. အဲဒါတွေကတော့ သေချာတယ်..
ဖြောင်း~~ဖြောင်း~ဖြောင်း~~ကောင်းတယ် သောင်းသောင်းဖျဖျကိုအားပေးလိုက်မယ် ပုဆိုးလှန်ပြတယ်ဆိုတော့ တော်တော်
ဟုတ်တယ်ဆူးရေ… မြို့တော်ဝန်နားမှာ ဘယ်သူတွေရှိတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲအတွက်သူတို့ဘယ်လောက်ပေးရတယ်ဆိုတာတွေ။ အဲလိုပေးလို့ မီးလောင်သွားတဲ့ဈေးတွေ၊ မြို့ထဲကအိမ်အဟောင်းတွေပြန် ဆောက်ခွင့်ပေးတာတွေ၊ Father Land ကမြို့တော်စည်ပင်အင်ဂျင်နီယာဌာန ကိုဘယ်လို အိတ်ထဲထည့်တယ်ဆိုတာတွေ၊ မကြားချင်မှအဆုံး။ နိုင်ငံသားဆောက် လုပ်ရေးလုပ်ငန်းငယ်လေးတွေဆို တော်တော်မျက်နှာငယ်ရတယ်လေ၊ ငေါက်လိုက်ငန်းလိုက်နဲ့၊ တော်တော်ဆိုးပါတယ်။ အဲဒီ လူမျိုးခြားတွေရဲ့ ငွေတွေက ဘယ်ကရတာလဲ၊ ပြည်ပကဘာသာရေးအဖွဲ့တွေ၊ ပြည်တွင်းက ဘာသာရေးအဖွဲ့တွေက ၀ိုင်းပြီးထောက်ပံထားတယ်လို့ သူတို့အတွင်းအတင်းအနေနဲ့ သိရတယ်။ ဒါကိုကိုရွှေမြို့တော်ဝန်ကြီး မသိတာလား၊ နှာစေးနေတာလား။ နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးသည် တိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင်များရဲ့လက်ထဲမှာရှိရမယ်ဆို။ လုပ်ကြပါအုန်း
နာစေးနေတာကွ.. ငါနှာချေးညှစ်ပြီး မှ ဆက်ပြောမယ်။ ဒါဘဲ.. ကွာ.. ဖုန်းချလိုက်သည်.. (ဂွက်)
ဒါနဲ့ တခြားမပြောဘဲ.. တရုတ်တန်းက သံပိုက်လုံးတွေ ဘာအတွက်လဲဟင်.. သိကြလား.. လူသွားလမ်း တည့်တည့်ထောင်ထားတာ..
http://freedomnewsgroup.com/2010/11/08/%E1%80%80%E1%80%99%E1%80%AC%E1%81%BB-%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%B8%E1%80%98%E1%80%AF%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8-%E1%80%9C%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AD/ မှာဖတ်ပြီးပါပြီ ။ သို့သော်လည်း တစ်ခါထပ်ဖတ်ရင် ထပ်ရယ်ရပါသေးတယ် ။
ဟ ဟ။ဖတ်ပြီးရီရတယ်။ကောင်းတယ်ဗျို့ 
Kong Chee mingalar